နေတိုးနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်သန်းမြိုင် တို့ကို မချီးကျူးဘဲ မနေနိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သက်မွန်မြင့်
နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ သက်မွန်မြင့်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမက မကြာသေးမီကကွယ်လွန်သွားတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသွေးရဲ့ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသွေးအတွက်ပူဆွေးသောက ရောက်နေကြတဲ့ နေတိုးတို့မိသားစုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်က ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သက်မွန်မြင့်ပြောထားတဲ့ အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သက်မွန်မြင့်က ” သားတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ အမေ! ညီတစ်ယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ အကို! အခြေနေမှန်တခုကို နာကျဉ်ကြေကွဲစွာနဲ့ လက်ခံဖို့ ကြိုးစားနေကြရတဲ့ အချိန်, နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ရတဲ့ အချိန်မှာတောင် ဒီလိုပြုမူနိုင်တာ မလေးစားပဲ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ပါ…ရင်ထဲက ခံစားရသမျှ မျိုသိပ် အတ္တကြီးလွန်းသူတွေကြား အတ္တကင်းတဲ့ ပုံရိပ် အတုယူနိုင်ဖို့ ကျွန်မ ဝေးနေသေးတယ် ” လို့ပြောထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်တော့မှ အတူတွဲပြီးမမြင်ရတော့မယ့် သားအမိ သုံးယောက်ပုံရိပ်
ညီလေးအတွက် ခံစားနေရတဲ့ အစ်ကို
သက်မွန်နဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်များ
သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်က နေတိုးတို့သားအမိကိုချီးကျူးစကား ဆိုထားပြီး သူမအတုယူနိုင်ဖို့ဝေးနေသေးတယ်ဆိုပြီးပြောထားတာလေးကို ပရိသတ်တွေသိရလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကြည့်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
တော်ရုံကိစ္စမျိုးဆို ရှင်းပြလေ့မရှိပေမယ့် နှလုံးရှော့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဟိန်းမင်းသူ